Miteraka biogas avy amin'ny fako puce ovy | Green Renewable
Miteraha biogas avy amin'ny fako puce ovy
Betsaka ny fomba famokarana angovo azo havaozina na hiteraka angovo fotsiny amin'ny fampiasana fako na fitaovana efa ampiasaina. Ohatra, ampitondrinay any amin'ny tobin'ny mpanamory fiaramanidina izy ireo amin'ny fitsaboana rano maloto sy famokarana biogas izay novolavolaina tao anatin'ny tetik'asa Life WOGAnMBR.
Izy io dia ny fahaizana manamboatra sy mamoaka biogas amin'ny fako kibble mangatsiaka sy ovy nendasina. Tena afaka mamokatra angovo amin'ny alàlan'ny fanararaotana an'ity karazana fako ity ve isika?
1 Fitrandrahana biogas
2 Tetikasa famokarana pilotra
Ny ozinina fisakafoanana mangatsiaka Eurofrits sy ny poti-ovy Matutano Nosedraina izy ireo ary mamorona teknolojia mampiasa fonontselan-keloka mba hahazoana sy hanivana rano avo lenta. Ity rano ity dia azo ampiasaina amin'ny fanondrahana ary ny biogas vokarina ao anatin'io dia azo ampiasaina amin'ny fanjifana angovo amin'ny zavamaniry famokarana.
Amin'izao fotoana izao, vokatra tsara kokoa no azo tamin'ny fahazoana biogas ao amin'ny zavamaniry Matutano. Ny indostrian'ny sakafo roa dia nanandrana ny famokarana biogas tamin'ny fampiasana an'io zavamaniry mpanamory fiaramanidina mampiasa teknolojia AnMBR. Ny Eurofrits, any Pozuelo de Alarcón (Madrid), dia mamokatra hena mangatsiaka, akoho, trondro, croquette ary ovy ary chips Matutano any Burgos.
Tetikasa famokarana pilotra
Ny tetikasa dia misy valiny tsara amin'ireo zavamaniry mpanamory miasa amin'ny enta-mavesatra organika samihafa. Nahavita tsara ny biomassa. Azo natao ny nahatratra Biogas 9.600 75 litatra isan'andro niaraka tamin'ny kalitaon'ny metana XNUMX%. Mampiseho ny fahaizan'ny teknika, toekarena ary tontolo iainana an'ity karazana tetikasa ity. Ny tombony ananany dia tsy hoe mamokatra biogas amin'ny famokarana angovo fotsiny, fa manivana ihany koa ny rano azo ampiasaina amin'ny fanondrahana. Tanjona ny hampihenana ny famokarana maloto araka izay tratra ary hametraka tena ho manana fahaleovan-tena amin'ny fomba fijery angovo.
Ho fanampin'izany, ity teknika ity dia azo ovaina amin'ny dingana rehetra amin'ny indostrian'ny sakafo, manampy amin'ny fampihenana ny fanjifana ny akora sy ny fihenan'ny fako vokarina. Amin'ity rafitra membrane ity dia misy ny fanivanana rano maloto amin'ny indostrialy izay tratra ataovy mety amin'ny fanondrahana izy satria ny karazan-tsiranoka mivaingana rehetra izay miteraka fihenan'ny fantsona dia manjavona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » biogaz » Miteraha biogas avy amin'ny fako puce ovy